FI.SE.MA. AMBATOVY - FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
TSY EKENA NY FANILIKILIHANA SY NY ANTSOJAY ATAO AMIN’NY MPIASAN’AMBATOVY
OZININA AMBATOVY AO TOAMASINA
Tato ho ato dia voaresaka matetika teto amin’ny haino aman-jery AMBATOVY noho ity aretina “Corona Virus” ity, ary voambara mihitsy aza fa loharanon’izany aretina izany indrindra ny ozinina ao Toamasina ka niteraka “STIGMATISATION” na fanilikilihana ny mpiasan’Ambatovy any anaty fiaraha-monina misy azy amin’ny faritra maro eto Madagasikara.
Raisina ohatra amin’izany:
-Arivonimamo: nisy olona izay lazaina fa mpiasan’Ambatovy nitsoaka nankany. Tsy mpiasan’ Ambatovy io olona io fa mpiasa ao amin’ny orinasa sous-traitant iray eo anivon’Ambatovy ary efa tany amin’ny faran’ny volana febroary izy no efa tsy niditra ny faritra misy ny orinasa Ambatovy intsony araka ny angom-baovao azonay. Fa noho ny FILAZANA nivoaka tamin’ny haino aman-jery mahakasika ny fepetra noraisina momba an’Ambatovy dia lasa nifanenjehan’ny polisy sy ny gendarme ilay olona tany an-toerana.
maro ny zanaky ny mpiasa tsy raisin’ny sekoly intsony.
Rehefa mitady trano hofaina vao hoe mpiasan’Ambatovy dia tsy misy manome.
Ny mpanofa trano rehefa mpiasan’Ambatovy dia voaroaka na ilaina vanony.
SATRIA hoe avy ao Ambatovy izay voizin’ny filazam-baovao ety ivelany fa manaparitaka ny aretina Corano Virus.
Ohatra vitsy ihany ireo fa maro ny azo ambara raha ny fitarainan’ny mpiasa tonga ety anivon’ny Sendika toa ny any Antsirabe sy Ambositra;
Noho izany maneho izao fanambarana izao ny sendika FI.SE.MA eto Ambatovy:
-Ny mpiasan’Ambatovy dia miaina ao anatin’ny Fenitra iraisam-pirenena hentitra sy avo lenta indrindra eo amin’ny lafiny Ara-pahasalamana sy Aro-loza: elanelana 1 m na ao am-piasana na any anaty fiara lehibe na kely hatramin’ny fotoana nahatonga van’io aretina io teto Madagasikara ka hatramin’izao fotoana izao izay mbola iasan’ireo mpiasa vitsy izay manao fikojakojana ao amin’ny orinasa Ambatovy.
Koa somary mahagaga ihany ny filazàna fa avy ao Ambatovy no nipoirana sy nanaparitaka io aretina io. (izay no fandraisan’ny olon-tsotra ny filazam-baovao tato ho ato momba an’Ambatovy).
-Ny 24 Marsa 2020 dia efa tsy tany am-piasana daholo ny ankamaroan’ny mpiasan’Ambatovy ary ny 6 Aprily 2020 dia nitsahatra tanteraka ny famokaran’ny orinasa.
-Ny mpiasan’Ambatovy dia tahaka ny malagasy rehetra ihany: miaina ao anaty fiaraha-monina ka ny fifandraisana ao anatin’izany fiaraha-monina izany dia mety misy risika ahazoana ny aretina fa tsy ho voatery avy any am-piasana ihany akory.
-Araka ny fanazavan’ny Filoham-pirenena tao Toamasina ny 7 mai 2020 dia tatsambo iray no nipoiran’io aretina io voalohany tao Toamasina. Tsy mpiasan’Ambatovy izany tatsambo izany.
-Takianay amin’ny fanjakana mba ho miralenta ny fanehoana antontan’isa eny amin’ny haino aman-jery ka: NA ho ambara avokoa ny toeram-piasan’ny tsirairay izay voan’ny tsimokaretina fa tsy Ambatovy ihany NA samy tsy misy ho ambara ny orinasa iaviany mba itandroana ny filaminanan’ny fiaraha-monina manoloana ny mety ho fivoaran’ity aretina ity.
-Tsy ekenay ny fanikilihana sy ny filazana eny amin’ny haino aman-jery fa mpifindra monina antsokosoko ny mpiasan’Ambatovy sy ny ankohonany.
-Ny Malagasy tsirairay dia manana ny zony hivezivezy an-kahalalahana eto Madagasikara ary anisan’izany ny mpiasan’Ambatovy sy ny ankohonany ao anatin’ny fanajàna ny lalàna manan-kery ao anatin’izao fahamaizana ara-pahasalamana izao. Koa dia manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana isan’ambaratonga izahay handray ny andraikiny tandrify azy manoloana ny fanitsakitsahana izany zo fototra izany.
-Efa misy ny COVID ORGANICS izay isaorana manokana ny filohan’ny Repoblika ny fanomezany lanja ny vita Malagasy satria mariky ny fitiavan-tanindrazana izany. Nahoana moa raha mifanantona ny fanjakana sy ny orinasa rehetra ka mijery fifananarahana ahafahana manaparitaka izany any amin’ny mpiasan’ny orinasa tsirairay amin’ny vidiny mirary ho an’izay mila izany?
-Mankasitraka ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fifehezana ny valan’aretina Corano Virus ary manentana ny Malagasy rehetra indrindra fa ny mpiasa hiray hina hiady amin’ny valanaretina Corano Virus ka hanaraka tsy misy fepetra ny toromarika ara-pahasalamana rehetra apetraky ny Filoham-pirenena iarovana ny ain’ny tsirairay sy ifehezana ity aretina ity.
Moramanga, zoma 15 mai 2020
S.G. FISEMA Alaotra-Mangoro S.G. FISEMA Mine S.G. FISEMA Ambatovy
Jean Emile Heritiana Joiada Mandimby
ANDRIAHASINORO RAZONIARISON ANDRIAMAHAZO